प्रधानमन्त्रीले भने–भारतले नेपाली भूमि मिचेकै हो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको एक इन्च भूमि पनि मिच्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले पर्साको छपकैयाको सीमा अतिक्रमणको संयुक्त स्थलगत रुपमा गरिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि..
भूकम्प र बाढी पीडितलाई थप एकलाख, वृद्धभत्ता अब ६५ वर्षमै
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प तथा बाढी पीडितहरुलाई दिँदै आएको रकम बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले भूकम्प तथा बाढी पीडितहरुलाई अनुदान स्वरुप दिँदै आएको रकममा १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको..
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा १७ उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने दावी विरोध र मनोयन फिर्ताको समय कटेपछि मात्रै निर्विरोध घोषणा गर्ने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले..
ओली–मोदी ट्युनिङ मिल्दै
काठमाडौं । निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेपछि वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभिएका छन् । चीननिकट मानिएका केपी ओली भावी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि भारतीय..
माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको नाम सूचीसहित
काठमाडौं । नेकपा माओवादीले राष्ट्रिय सभाका १४ उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ। माओवादी नेतृत्वले मंगलबार रामबहादुर थापा ‘बादल’ र दिनानाथ शर्मासहित १४ जना उम्मेदवारको टुंगो लगाएको हो। यी हुन् माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा..
जापानमा भारी हिमपात, १८० मानिस घाइते, चिप्लिएर ७०० गाडी दुर्घटनाग्रस्त
काठमाडौं । जापानको राजधानी टोकियोमा भारी हिमपात हुँदा हिउँको बाक्लो पत्र जमेपछि हजारौं यात्रीहरू बाटैमा फसेका छन् । सार्वजनिक यातायात पनि यसैले गर्दा अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । जापानको मौसम विभागले टोकियोका..
बजेट बनाउँदा नै एक खर्ब रुपैयाँ ढाँटेर बनाइयो
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट एक खर्ब रुपैयाँ गलत तथ्यांक राखेर बनाएको ६ महिनापछि अहिले आएर खुलेको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। यस वर्षको..
एमालेले तीन वटा प्रदेशको राष्ट्रियसभा उम्मेदवार टुंगो लगायो, कोमल वलीपनि परिन्
काठमाडौं । नेकपा एमालेले चर्चित लोकगायिका तथा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि राप्रपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेकी कोमल वलीसहित १३ जनालाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार एमाले अध्यक्ष..
प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री माओवादीलाई नछोड्ने एमालेको निर्णय
काठमाडौं । नेकपा एमालेको प्रदेश सभा ६ को संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई नछाड्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयोजन समितिको बैठकले निर्णय गर्नुअघि नै प्रदेश सभाको..
एमाले-माओवादी एकता संयोजन समिति बैठकका तीन निर्णय
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासबा बसेको एमाले–माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सकिएको छ। बैठकले प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गठित कार्यादलको रिपोर्ट अनुमोदन गर्ने..
विश्व बैंकको ४४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग
काठमाडौँ। विश्व बैंकले नेपालको सामाजिकरआर्थिक विकासका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने तीनवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न ४४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम..
बेसीशहर । सरकारी राहत पाएसँगै जिल्लामा पुनःनिर्माणले गति लिएको छ । राहतको लामो प्रतीक्षामा बसेका भूकम्पपीडितले राहत रकमको पहिलो किस्ता पाउनासाथ पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका हुन् । पहिलो किस्ता पाएसँगै प्राविधिक..
ऋषिमुनिले विकास गरेको पूर्वीय दर्शनमा आधुनिक विश्व समुदायको आकर्षण
काठमाडौँ । वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले विभिन्न कालखण्डमा ऋषिमुनिले विकास गरेको पूर्वीय दर्शन र मान्यताका आधारमा बनेका परम्परा र संस्कृतिले विश्व समुदायलाई आकर्षित गरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘रिभो साइन्स’ नामक..
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज तीन घन्टा वार्ता भएको छ। ओली निवास बालकोटमा दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म दुई नेताहरुबीच वार्ता..
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई शुक्रवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति निवासमा शुक्रवार आयोजना भएकोे विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदेश प्रमुखले शपथ लिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको..
चीनको अर्थतन्त्र ६.९ प्रतिशतले बढ्यो, ७ वर्ष यताकै सबैभन्दा राम्रो
एजेन्सी । निर्माण क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्दा चीनको अर्थतन्त्रमा ऋणको छाँया गाढा हुँदै गएको र यसले त्यहाँको आर्थिक विस्तार खुम्चिने अनुमान अन्तरराष्ट्रिय अर्थशास्त्रीहरुको थियो तर यसविपरित अर्थतन्त्र ६.९ प्रतिशतले..
नवराज सिलवालले भने, 'प्रतिशोध साँध्न नौटंकी हुँदैछ, डटेर सामना गर्छु'
काठमाडौं । पूर्व डीआईजी एवम् ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवालले आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको भन्दै त्यसको डटेर सामना गर्ने बताएका छन् । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते गरेको अभियोगमा..
७ प्रदेश प्रमुखको शपथग्रहण आज
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण लिने भएका छन् । सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गराउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गराउन लागेकी हुन्..
अछाम । ममता विकलाई छाउ हुने समय आयो कि कहाँ रात बिताउने भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्छ। साबिकको शिद्धेश्वर गासि वडा नं ३ नौलाकोट गाउँमा छाउगोठ भत्काइएका छन्, त्यसैले पनि यस्तो..
समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा संसदको नाम सार्वजनिक (लिष्टसहित)
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेससभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको विजयी उम्मेदवारको नामावली आज सार्वजानिक गरेको छ । आयोगका अनुसार सार्वजानिक विजयी उम्मेदवारको नामावली यसप्रकारका रहेको..
नुवाकोटका आधा भूकम्पप्रभावितले अनुदान पाएनन्
नुवाकोट । भूकम्पले क्षति पुगेकामध्ये नुवाकोटमा सरकारी अनुदानका लागि तोकिएको समयभित्र आधा लाभग्राही मात्र निजी निवास निर्माणको प्रक्रियामा समेटिएका छन् । विसं २०७३ पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता रकम लिएकालाई यो वर्षको..
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीमा आफूहरुको सहमति नरहेको बताएका छन् । बैंककमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बिहीबार स्वदेश फर्किएका ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य..
काठमाडौं । प्रदेश नं १ को राजधानी धनकुटा बनाइनु पर्ने मागसहित आन्दोलनरत् धनकुटावासीले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । उनीहरुले बिहीबार बिहान १० बजे प्रशासन कार्यालयमा आगजनी गरेका हुन् ।..
प्रदेशका केन्द्रबारे भट्टराईको टिप्पणी– पञ्चायतकालको जति पनि सन्तुलित भएन
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले सरकारले तोकेको अस्थायी प्रदेश केन्द्रको बारेमा टिप्पणी गर्दै संघीयताको मर्मविपरित र दल तथा नेताको नेताको निजी स्वार्थ हावी..
काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखको तलब १ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक नियुक्त हुन लागेका प्रदेश प्रमुखलाई पारिश्रमिक र सुविधासहित..
सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्यो, यि हुन प्रदेश प्रमुख र केन्द्र
काठमाडौं । सरकारले सात प्रदेशको केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले केन्द्र प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको हो । प्रदेश प्रमुखमा कांग्रेस र मधेसवादी दुई दलले भागवण्डा गरेका छन्..
लिच्छविकालीन इतिहास खोज्दै एमाले महासचिव किन पुगे सत्यमोहनको निवासमा ?
काठमाडौँ । “उसबेला बूढानीलकण्ठदेखि शंखमूल–पाटनसम्मलाई एउटै विशालनगर भनिन्थ्यो ।” शताब्दी वाड्यमय पुरुष सत्यमोहन जोशीले नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई भन्नुभयो, “लिच्छविकालीन राजधानी मानिने हाँडीगाउँ आसपासका ठाउँमा नेपालको पहिलो प्रामाणिक अभिलेख..
मनकामना मन्दिर जीर्णोद्धारलाई ६ करोड दान, सुन पनि मागियो
गोरखा । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गोरखाको मनकामना मन्दिरको जीर्णोद्धारका लागि भक्तजनबाट ६ करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग संकलन गरेको मनकामना मन्दिर जीर्णोद्धार समितिले मन्दिरको छानामा राख्ने तामाको पातामा जलप लगाउनका लागि सुन..
दीपक मनाङ्गेलाई ज्यान मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजाय, गणेश लामाले सफाइ पाए
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा दीपक मनाङ्गेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । डन दीपक मनाङ्गे प्रदेशसभा चुनावमा मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य विजयी भएका छन् । तर, सपथ..
लमजुङमा जमिनभित्रबाट निस्किएको धुँवाबारे भू–गर्भशास्त्रीले निकाले यस्तो निश्कर्ष
सुन्दरबजार । स्थानीय सिउडीबार बस्ती नजिकै जमिनबाट निस्किएको बाफबाट कुनै खतरा नभएको भू–गर्भशास्त्रीले जनाएका छन् । जमिनबाट निस्किएको बाफ कुनै प्रकोपको लक्षण नभई सामान्य भएको उनीहरुको भनाइ छ । बिहान र..
Results 1994: You are at page 32 of 67